महिलाहरुले कस्तो प्रकारको ह’स्त"मै’थुन गर्छन ? - Darpanpost
» रोचक अंक: 40924
महिलाहरुले कस्तो प्रकारको ह’स्त”मै’थुन गर्छन ?
Darpanpost बिहिबार, कार्तिक २७, २०७७ मा प्रकाशित
हु’स्तमै’ थुन यौ’न सुख प्राुुप्त गर्ने सबैुभन्दा सजिलो यौ’न क्रियाुुकलापको रुपुमा रहेुको पाइन्छ । अझैुण् पनि समाण्जमा ह’स्तण्मै’थुन गर्नु ढरुपले अ’पराध जस्तै मानिन्छ । यौ’वढनावस्थामा पुगेका महिलाहरुले आफ्नो क्लण्इटरिस ९भगसेफ० वरीपरीको भागमा स्पर्श गरेर ह’स्तमै’थुन गर्ने गर्छन् ।
किशोरावस्थामा गरिने यौ’न क्रियाकलापमध्ये ह’स्तमै’थुन दोश्रोमा पर्दछ । युवतीहरु प्राय ह’स्तमै’थुन गर्ने गर्दछन् । यौ’न स्वास्थ्य व्यवहारको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार १४ देखि १७ वर्ष उमेरमध्ये ४८ प्रतिशत युवती र ७३ प्रतिशत युवकले ह’स्तमै’थुन गर्ने गरेका देखिएको छ । त्यस्तै २५ देखि २९ वर्ष उमेरकाले ८५ प्रतिशत महिला र ९४ प्रतिशत पुरुषहरुले विवाह गरेपनि ह’स्तमै’थुन गर्ने गर्दछन् ।
महिलाहरुले कस्तो प्रकारको ह’स्तमै’थुन गर्छन रु महिलाहरुले ह’स्तमै’थुन गर्नका लागि नयाँ नयाँ तरिका वा विधिहरु अपनाउने गरेका पाइन्छन् । तर, आम रुपमा हातले क्लाइटोरल ९यौ’नअं’गको गोलाकार भाग० अगाडि पछाडी वा तल माथि स्प’र्श गरेर यौ’न आनन्द लिने गर्दछन् भने केही महिलाहरुले बेडमा सु’तेर तकिया ९सिरानी० ले दुई ति’घ्रा रग’डेर यो’नीको तल्लोपट्टि हुने पेल्वि’क फ्लो’र मां’शपे’शीलाई उ’त्तेजित गरेर पनि ह’स्तमै’थुनबाट यौ’नसुख प्राप्त गर्दछन् । त्यसैगरी केही महिलाहरुले यौ’नअं’गभित्र हातको वा कृत्रिम से’क्स टोय’ज औ’ला छि’राएर यौ’न आनन्द लिने गर्दछन् ।
ह’स्तमै’थुनका फाइदाहरु अधिकां’श किशोरीहरुको मनोसामाजिक विकासमा ह’स्तमै’थुनले सकारात्मक भूमिका निभाउने गर्दछ । ह’स्तमै’थुनका कारण उनीहरुले कस्ता कुराहरुले सन्तुष्टि दिन्छ भन्ने थाहा पाउँदा मानसिक तना’व अन्त्य हुन्छ । आफ्नो यौ’न प्रतिक्रिया र यौ’न उ’त्तेजनाको बारेमा पनि जानकार हुन्छन् ।
किशोरावस्थामा भावनात्मक रुपमा परिपक्व हुने समयमा यौ’न ह’स्तमै’थुनले यौ’न सम्बन्धको जिज्ञासाहरुको बारेमा जानकार रहन्छन् । ह’स्तमै’थुनले सकारात्मक आ’त्मीयताको अनुभव प्रदान गर्नुको साथै यौ’न सन्तुष्टिमा वृद्धि गर्न सक्छ । ह’स्तमै’थुनका वेफाइदाहरु हस्त’मै’थुन आफैमा हानि’कारक होइन ।
यद्यपी आवश्यकता भन्दा बढी भयो भने यसले वेफाइदा पनि गर्नसक्छ । पटक पटक ह’स्तमै’थुनमा संलग्न रह्यो भने जीवनमा असहजता उत्पन्न गर्नेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ । ह’स्त’मै’थुन गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी यो’नी आफैमा एक संवेदनशील अं’ग हो । यौ’न प्यास मेटाउने नाउँमा ह’स्तमै’थुन गर्दा धेरै जोडसँग यो’नीलाई रगड्नुहुँदैन ।
यो’नीमा औला या कुनै वस्तु छि’राउनु अघि ती वस्तुहरु सफा भए नभएको ख्याल गर्नुपर्छ । फोहोर वा संक्रमित वस्तुहरु छिराउँदा यो’नीमा सं’क्रमण पनि आउनसक्छ । यस्तो हा’नीबाट ब’च्नको लागि हात अथाव से’क्स टो’यजहरु साबुन पानीले सफा गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
धारिलो तथा क’डा वस्तुको प्रयोग गर्नुहुदैन । त्यस्ता वस्तुहरुले योनीमा चोट पुग्न सक्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । ह’स्तमै’थुन गर्दा फलफूल तरकारीको प्रयोग गर्नुहुँदैन । त्यसो गर्दा एउटा सं’क्रमणको ख’तरा रहन्छ भने अर्कोतर्फ ती चिजहरु भित्रै टु’क्रिने र रहने पनि हुनसक्छन् ।
य’स्तो अव’स्थामा आ’उँछ युव’तीको दिमा’गमा शा’रि’रिक सम्प”र्क रा’ख्ने चा’हना
हेर्नुहोस्: धेरै ‘वि’र्य’ खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ…
हेनुहोस : यौन सम्पर्कको बेला महिलाहरु किन चिम्लन्छन् आँखा ?
मंसिर ८ गते सोमबार आजको राशिफल
गुल्मीको चन्द्रकोटमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्किया कार्यक्रम सम्पन्न